Goorma ayuu furmayaa Shirka arrimaha doorashadda | KEYDMEDIA ONLINE
Goorma ayuu furmayaa Shirka arrimaha doorashadda
Muqdisho waxaa mudooyinkii dambe ka socda kulamo loogu gogol-xaarayo Shirka Farmaajo iyo Madaxda Maamullada dalka.
MUQDISHO, Soomaaliya - Shirka Farmaajo iyo Madaxda Maamul Goboleedyada dalka ayaa la filayaa inuu ka furmo Muqdisho Axad soo socota, March 21, sida ay KON ogaatey.
Shirkan ayaa dib u dhac ku yimid waqtigii loogu tala-galay inuu furmayo sababo dhanka is-afgarad la'aanta Madaxada, waxaana dhex-dhexaadinayay Wakiiladda Beesha Caalamka oo ku dhexjiray maalmahan.
Waxuu qorshaha yahay in Shirka lagu gaaro heshiis lagu dhameynayo khilaafka hanaanka doorashadda, iyadoo la raacayo heshiiskii 17-kii Sep 2020 oo Farmaajo lagu eedeeyay inuu jebiyay kadib markii uu dhisay gudi doorasho oo sharci darro ah iyo inuu diiday in doorashada Garbahaarey uu Axmed Madoobe maamulo.
Madaxda Puntland iyo Jubbaland ayaa ah caqabada ugu wayn shirka, waxayna shuruud ku xireen in shirka la ballaariyo oo lagu soo daro Musharixiinta, maadaama Farmaajo watigiisa uu dhamaaday, islamarkaana uusan lahayn awood dastuuri ah oo go'aanno ku gaari karo.
Soomaaliya ayaa gashay marxalad hubanti la'aan ah kadib markii uu dhamaaday mudo-xileedka Farmaajo Feb 8, iyadoo aan dhicin doorashadii la filayay, waxaana Villa Somalia qorsheysay mudo-korarsi hal sano ah, oo aan dastuurka ogoleyn.